Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Website Service Solution
About Mandalay Directory
Chan Mya Tharsi
Maha Aung Myay
Welcome to Chanayethazan
မွို့နယျ Chanayethazan ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ အမရပူရမွို့နယျ အောငျမွသောစံမွို့နယျ
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် သည် မန္တလေးမြို့၏ မြို့လယ်တွင် တည်ရှိပြီး ရပ်ကွက် (၂၀)ရပ်ကွက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၏ အရှေ့ဘက် တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက် တွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ မြောက်ဘက် တွင် အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက် တွင် ဧရာဝတီမြစ် တို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် သည် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက် အမြင့်ပေ (၂၅၀) တွင်တည်ရှိပါသည်။ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်သည် မန္တလေးမြို့၏ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော မြို့နယ်လည်း ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့၏ အထင်ကရ အမှတ်အသား တစ်ခုဖြစ်သော ဈေးချိုတော်နှင့် နာရီစဉ်ကြီး တည်ရှိပြီး ဟိုတယ်များစွာ တည်ရှိရာမြို့နယ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
အကျယ်အဝန်း အားဖြင့် (၁၃.၁)ဧရိယာစတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာ လျှင် (၁၅၀၆၅.၉)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးကောက်ယူသော သန်းခေါင် စာရင်းအရ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃၃၂၈၁)စုခန့် နေထိုင်လျှက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၁၉၇၁၇၅)ဦးမျှ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် တွင် ဆိုင်၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပေါင်း (၁၂၉၆၀)ကျော် တည်ရှိပြီး ယင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်း အရေအတွက် (၇၆၆၀၀) ကျော်ခန့် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးလမ်းညွှန် မှ ကောက်ယူ ရရှိထားသော စာရင်းများအရ သိရှိရပါသည်။ အခြေခံ ပညာ မူလတန်း ကျောင်း (၃၂)ကျောင်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်း (၆)ကျောင်း နှင့် အထက်တန်း ကျောင်း (၁၀)ကျောင်း တည်ရှိပြီး မြို့နယ်၏ စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်များမှာ (၀၅၀၂၁၊ ၀၅၀၂၂၊ ၀၅၀၂၃၊ ၀၅၀၂၄)တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)သည် မြန်မာပြည်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် (၅) ခုအနက် မန္တလေးမြို့၏ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် တွင်ရှိသော ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)သည် Educational Commission for Foreign Medical Graduates က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသိအမှတ်ပြုသော ကျောင်း ၅ ကျောင်းအနက် တစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဗထူးအားကစားကွင်း သည် လည်း ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ဘက်စုံသုံး အားကစားပြိုင်ကွင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပရိတ်သတ် (၁၇၀၀၀) ကျော် ဝင်ဆန့်ပြီး အထက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက အားကစားပြိုင်ကွင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Mandalay Yadanar Mall, Skywalk
Chan Aye Thar Zan Demographic & Economic Activities
Total Population 197,175*
Area (km2) 13.1**
Population Density (persons per km2) 15065.9 persons
Population In Conventional HouseHolds 160,131 160,131
Number Of Convetional Households 33,281 33,281
Mean Household Size 4.8 persons***
•In Chanayetharzan Township, there are more females than males with 90 males per 100 females.
•In Chanayetharzan Township, entire population live in urban areas.
•The population density of Chanayetharzan Township is 15,066 persons per square kilometre.
•There are 4.8 persons living in each household in Chanayetharzan Township. This is slightly higher than the Union average.
Productions 284 2205
Retails 3882 18039
Wholesales 4470 20359
Services 4232 34539
Trading 89 1508
All about Chanayethazan
: U Myo Naing
: Dr Than Win
: U Aung Shwe
: Dr Soe Than
: 09 402 630 236
Address : Blk 10/1-2, 78 St., Between 30 St. and 31 St.,
Phones : 09-977184182
Category : Foodstuffs
Category : Dairies
Address : 28 St., Corner of 83 St.,
Phones : 02-4031624, 02-4060241, 09-977438977
Asia Naing Enterprise Co., Ltd.
Category : Laboratory Equipment & Supplies
Address : 123, 34 St., Between 77 St. and 78 St.,
Phones : 02-4031814, 09-91002720, 02-4031816, 02-4064880
Events : Yangon Region Young Entrepreneurs Association (YRYEA) နှင့် Myanmar Practice of Rajah & Tann Asia တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဒုတိယမြောက် Training Session "Raising Capital and Seeking Financing for Your Business - Do's and Don'ts) ကို (၁၀.၀၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့ Yangon Region Young Entrepreneurs Association (YRYEA) Facebook Page တွင်တိုက်ရိုက် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်။ Events : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသွားမယ့် "COVID-19 & Myanmar Economy; Past, Present & Future" စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကို ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ် ရှိ MRCCI Ball Room တွင် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Events : Yangon Region Young Entrepreneurs Association (YRYEA) နှင့် Myanmar Practice of Rajah & Tann Asia တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဒုတိယမြောက် Training Session "Raising Capital and Seeking Financing for Your Business - Do's and Don'ts) ကို (၁၀.၀၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့ Yangon Region Young Entrepreneurs Association (YRYEA) Facebook Page တွင်တိုက်ရိုက် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်။
Events : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသွားမယ့် "COVID-19 & Myanmar Economy; Past, Present & Future" စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကို ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ် ရှိ MRCCI Ball Room တွင် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Telephones : 02-4000613,02-4000614
Hotline : 02-4000611
Put your listing on our website for free.
Copyright © 2018 Yangon Directory, Myanmar's leading yellow pages business directory. All Rights Reserved.